မြန်မာကျမ်းစာအုပ်တွင် ဆင်းရဲခံရသောအချိန်ဟုရေးသားထား သော်လည်း အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွင် when you suffering ဟုရေးသားသည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် နဂိုမူလဆိုလိုရင်းသည် ဆင်းရဲခြင်း (ငွေကြေးချို့တဲ့ခြင်း) ဆိုသည့်အသုံးအနှုံးထက် ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောအချိန် ဟုဆိုလျှင်ပို၍တိကျမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဒုက္ခဆင်းရဲဟုဆိုရာတွင် မကျန်းမမာဖြစ်ခြင်း၊ သေခြင်းတရားကိုကြုံတွေခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း နှင့် ညင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းများစသည်တို့ကို ခြုံငုံ၍ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သော ဒုက္ခဆင်းရဲခံခြင်းမျိုး မိတ်ဆွေ၏ ဘ၀တွင်ကြုံတွေ့ရပါက (ဆာ ၃၄း၃) တွင် “ငါသည် ထာဝရဘုရားကို ရှာသောအခါ နားထောင်တော်မူ၏။ ကြောက် မက်ဖွယ်သော အကြောင်းအလုံးစုံတို့ အထဲက ငါ့ကို ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ “ ဟုဖော်ပြသကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားသခင် သည် မိတ်ဆွေ၏ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအလုံးစုံတို့မှ ကယ်နှုတ်လိုသော ဘုရားဖြစ်သည်ကို အောက်မေ့ သတိရလျက် အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကာ ဆုတောင်းပါ။ အချိန်၊ နေရာ၊ အခြေအနေ မရွေး ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရန် ဘုရားရှင်အလိုရှိပါသည်။ (၁ပေ ၄း၁၂) တွင် “ချစ်သူတို့၊ သင်တို့ကို စုံစမ်းစရာဘို့ ယခုခံရသော မီးစစ်ခြင်းအရာကိုကား၊ သင်တို့၌ အံ့ဘွယ်သော အရာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်၍၊ အံ့သြခြင်းမရှိကြနှင့်” ဟုဆိုထားသကဲ့သို့ ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက် အံ့သြတွေဝေ၍ စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်မဟုတ်ဘဲ သာ၍ ဘုရားသခင်၏ ရင်ခွင်တော်သို့ တိုးဝင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ရွှင်လန်းသောအချိန်
အပိုဒ်ငယ် ၁၄ နှင့် ၁၅(က) တွင် “နာသောသူရှိလျှင်၊ သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍ သူတို့သည်သခင်ဘုရား၏ နာမတော်ကိုအမှီပြုလျက်၊ လူနာကိုဆီနှင့် လူး၍ သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစေ။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်း၏ ပဌနာသည် လူနာကိုကယ်ဆယ်၍၊ သခင်ဘုရားသည် သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်။” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မနာမကျန်းဖြစ်သောသူတို့ကို ခံစားရသော ရောဂါဝေဒနာများမှ ပေးပျောက်စေနိုင်သူ ဖြစ်သည်ကို မိတ်ဆွေ စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်လက်ခံ စေလိုပါသည်။ (ဧဖက် ၃း၂၀) တွင် “ငါတို့၌ ပြုပြင်သော တန်ခိုးတော်အတိုင်း၊ ငါတို့တောင်း ပန်ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာ ပြုခြင်းငှါတတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊” ဟုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းသည့် အရာများထက်ပင် ပို၍တတ်နိုင်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ အနည်းငယ်ထပ်လေ့လာမည်ဆိုလျှင် အသင်းတော် (သို့) သင်းအုပ် တို့သည် လူနာကိုပေးပျောက်စေ သောသူ မဟုတ်ဘဲ၊ သင်းအုပ်အားဖြင့် (သို့) အသင်းတော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မနာမကျန်းဖြစ်နေသူကို မနာမကျန်း ဖြစ်ခြင်းမှ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ် သည်။ ဤနေရာတွင် အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွင် “Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. “Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. ဟုသုံးနှုံး ထားခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မနာမကျန်းဖြစ်နေသော အသင်းသား တစ်ဦးကို ဆီနှင့် လူးကာ ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက် အသင်းထောက်လူကြီးများ (Elders) တွင်လည်းတာဝန် ရှိသည်ကိုဖော်ပြလိုသည်။ အသင်းတော်တွင်မနာမကျန်းဖြစ်နေသူအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက် (၄) ချက်ကို ဆင်ခြင်သတိရစေလိုပါသည်။
အဆင့် ၄။ အပိုဒ် (၁၅) တွင် အထက်ပါအတိုင်းပြုလျှင် ကျန်းမာခြင်း အခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားရှင်၏ ကတိကိုတွေ့ရသည်။ “သခင်ဘုရားသည် သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်။” တစ်ခုတော့ရှိသည်၊ အဆင့် ၁ မှ ၃ အထိ ကိုလိုက်လျှောက်ရာတွင် ဘုရားသခင်အား အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ၄။ အပြစ်ပြုမိသောအချိန်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၅ နှင့် ၁၆ တွင် “သူသည် အပြစ်ပြုမိသော်လည်း ထိုအပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်။ အချင်းချင်း တယောက်နှင့်တယောက်၊ ကိုယ်အပြစ်ကို ဘော်ပြတောင်းပန်ကြလော့၊ ချမ်းသာရမည်အကြောင်း အချင်းချင်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းကြလော့။ သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍ အရှိန်ကြီးသောပဌနာသည် အလွန်တန်ခိုးပါ၏။” ဟုဖော်ပြထားသည်။ သူသည် အပြစ်ပြုမိသော်လည်း (If he has sin…..) ဆိုသည့် အပိုဒ်ကို တနည်းအားဖြင့် ဤသို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်နိုင်သည်။ “သူ၏မနာမကျန်း ဖြစ်နေမှုသည် သူပြုခဲ့ မိသော အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်လျှင်. . .”။ ဘုရားသခင် မကြိုက်နှစ်သက်သော လောကအပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်မိသူသည် သူ၏ခန္ဓာတွင် မနာမကျန်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ (ဆာလံ ၃၂း၃-၅) တွင် ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက “ထာဝရဘုရား အပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့် လွတ်၍လှည့်စားတတ်သော စိတ်သဘောထားနှင့် ကင်းစင်သောသူသည် မဂ်လာရှိ၏၊၊ ငါသည်အပြစ်ကို မဘော်မပြဘဲ နေစဉ်အခါတနေ့လုံး ညည်းတွားသောအားဖြင့် ငါ့အရိုးတို့သည် ဆွေးမြေ့ခြင်းသို့ရောက်ရ၏၊၊ နေ့ညဉ့်မပြတ်ကိုယ်တော်၏လက်သည် အကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလေး၍ အကျွန်ုပ်၏ ချွေးသည် နွေကာလ၌ သွေ့ခြောက်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ၏၊၊ တဖန်အကျွန်ုပ် သည် ကိုယ်အပြစ်ကို ရှေ့တော်၌ ဝန်ချပါ၏၊၊ ပြုမိသော ဒုစရိုက်ကို ဝှက်၍ မထားပါ၊၊ ငါလွန်ကျုးသောအရာကို ထာဝရဘုရားအား ဘော်ပြတောင်းပန် မည်ဟု ပြောဆိုသောအခါ ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားခြင်း အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူ၏၊၊” ဟု သူ၏အပြစ်ရှိသောအချိန်တွင် ခံစားခဲ့ရသည့် အရာကို ဖော်ပြရေးသားခဲ့သည်ကို သတိချပ်သင့်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ထံ အပြစ်ဝန်ချ တောင်းခံရန်အတွက် မိမိတို့အပြစ်များကို ဘော်ပြရန်အတွက် အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးများသည် အကောင်းဆုံးသော သူများဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ အပြစ်ကို ဘော်ပြ ပြီးမှ ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားကို အသနားခံရန်ဘုရားရှင်အလိုရှိပါသည်။ ထိုနောက် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ “သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍ အရှိန်ကြီးသောပဌနာသည် အလွန်တန်ခိုးပါ၏။” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤအပိုဒ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မနာမကျန်းဖြစ်သူတွင် မည်သည့် အစွမ်းအစ၊ အရည်အချင်းမျှပင် မရှိလင့်ကစား ဆုတောင်းပေးသောသူသည် သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါက သူ၏ဆုတောင်းချက်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်ဟုနားလည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်တွင်မူ “The prayer of faith….” ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသူ၏ ဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ နိဂုံး Missionary Hudson Taylor သည် သူ၏ပထမဦးဆုံးသော တရုတ်နိုင်ငံ ဧ၀ံဂေလိခရီးစဉ်အဖြစ် သဘောင်္ တစ်စီးတွင်လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့စဉ်က ဆူမထရာ နှင့် မလေးကျွန်းဆွယ်တ၀ိုက်အရောက်တွင် သူ၏အိပ်ခန်းတံခါးကို ကပ္ပတိန်မှလာခေါက်ပြီး။
This entry was posted on December 16, 2010 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Thawngno and tagged Prayer, Thawngno.	Shortlink